August 2012 ~ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုတွင် ခိုလုံနေကြသော ကချင်ဒုက္ခသည် ကလေးငယ်နှစ်ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် တွေ့ရစဉ်။
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက် ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရတပ်တွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာ ခိုလှုံနေရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို မိမိတို့ ကူညီနေကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် အင်န်အယ်လ်ဒီ ရုံးတာဝန်ခံ ဦးခင်မောင်ချင်းက ပြောပါတယ်။
"ဒုက္ခသည်တွေစုဝေးရာ ၃၁ နေရာရှိတယ်။ ၃၁ နေရာအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ အညီအမျှ ခွဲဝေနိုင်သလောက်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ပါတီဝင်တွေက တစ်နယ်လုံးကနေပြီးတော့ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား ၊ ငြုပ်၊ ကြက်သွန် ငွေရေးကြေးရေးကအစ တတ်နိုင်သလောက် နေရာတိုင်းကို ရောက်အောင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ၂၈ နေ့ကနေစ အကူအညီပေးတယ်။ စခန်းတိုင်းမှာ လူဦးရေ ရှိသလိုပေါ့။ အချိုးကျနဲ့ စခန်းတစ်ခုမှာ ဆန်တစ်အိတ်ဆို တစ်အိတ်၊ ဆီ ၂ပုံးဆို ၂ပုံးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း အကြမ်းဖျင်း ဝေစုခွဲပြီးမှ မရောက်ရ မရှိအောင်ပေါ့။ ရှိသမျှ စခန်းတိုင်းကို ရောက်အောင်သွားတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ ပါတီအတော်များများကို ဆက်သွယ်လာတဲ့ အလှူရှင်တွေလည်း ရှိတယ်လေ။ တော်တော်များများကတော့ တတ်နိုင်တဲ့ လူတွေကနေ လာပြီးတော့ လှူကြတာ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အညီအမျှဖြစ်အောင် ပြန်ဖြန့်ပေးတယ်"
ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရတပ်တွေရဲ့ တိုက်ပွဲကြောင့် တရုတ် မြန်မာနယ်စပ်နဲ့ ပြည်တွင်းစခန်းတွေမှာ အရင်က ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ရှစ်သောင်းဝန်းကျင်ရှိပြီး အခု လောလောဆယ် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်း ဒေသမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပါဆိုရင် စုစုပေါင်း တစ်သိန်းကျော်လာပြီလို့ ဒုက္ခသည်အရေး ကူညီဆောင်ရွက်သူတွေက ခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်၊
ဖားကန့် ကုလားမှော် ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ “ဝေ" ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီနားမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ KIA တပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန် KIA ဘက်က ပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ထိမှန်ပြီး အခုလို ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ ဒေသခံတစ်ဦးက RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။
"မနေ့က မွန်းလွဲ တစ်နာရီ ကျော်ကျော်လောက်ကနေ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ နှစ်ဖက်တပ်တွေ ပစ်ကြတယ်။ ပစ်ကြခတ်ကြရင်းနဲ့ သုံးနာရီ ကျော်ကျော်လောက်မှာ KIA ဘက်က ပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးက ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆီဘောက်ဆာကို သွားထိပြီး ဆီဘောက်ဆာ မီးလောင်ပြီးမှ ကုမ္ပဏီကထားတဲ့ ယမ်းဂိုဒေါင်ပေါက်ကွဲသွားတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဖားကန့်တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ လူတွေက အထိတ်အလန့်နဲ့ လူတွေအားလုံးက အကုန်ပြာယာခတ်ပြီးမှ ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာပဲ ဖြစ်သလိုလို အနေအထားမျိုးနဲ့ သူတို့ တွေဟာအကုန်လုံး ကျီးလန့်စာစားနဲ့ အဲတာ ၃ နာရီကျော်လောက်မှာ ဖြစ်သွားတာ"
ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေကို ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ အဆောက်အဦးတချို့ ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖားကန့်ဒေသမှာ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့် အခုလို ပြင်းထန်တဲ့ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားမှုဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နယ်မြေမလုံခြုံတဲ့အတွက် ဖားကန့်ဒေသက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ ခရစ်ယာန် ကျောင်းတွေက ဒုက္ခသည်စခန်း ၃၀ လောက်မှာ စစ်ပြေးစစ်ရှောင် ပြည်သူ တစ်သောင်းနီးပါး ရောက်ရှိနေပါတယ်။
photo courtesy of Kachinnet.net
ဆဒုံးမြို့နယ်ခွဲ နယ်စပ်မှတ်တိုင် ၆ နှင့် ၈ ဒုက္ခသည်စခန်း၊ မိုးမောက်မြို့နယ် မိုင်ဂျာယန်အနီး ဆိုင်မိုင်ပါနဲ့ အင်ဘာပါ ဒုက္ခသည် စခန်းများ၌ UNOCHA, UNHCR, WFP တို့က အကူအညီပေးနေစဉ်။
တရုတ်အစိုးရက ကချင်ဒုက္ခသည် တစ်ထောင်လောက်ကို စစ်ပွဲဖြစ်နေရာ ဒေသတွေကို ပြန်ပို့ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် လေးထောင်လောက်ကိုလည်း ပြန်ပို့ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ လူ့အခွင့်ရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့HRW က ပြောဆိုထားပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ အမေရိကန်အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ Patrick Ventrell ကပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်မှ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သူတို့ပြန်ရမှာ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ အမေရိကန်အစိုးရက ပြောဆိုပါတယ်။
ကချင်ဒုက္ခသည် ၉သောင်းကျော်တိုးလာဟု ကချင်အဖွဲ့များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
သြဂုတ်လ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့-KIO နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ယခုဆိုလျှင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ၉သောင်းကျော် တိုးလာသည်ဟု (ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ)မှ ယမန်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာရောက် ကချင်အဖွဲ့များနှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်အဖွဲ့တို့ စုပေါင်းထားသည့် အဖွဲ့ ၁၁ဖွဲ့ပါသည့် ၎င်းအဖွဲ့သည် ကချင်ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်ဦးရေ တဟုန်ထိုး များပြားလာသည်ကို ထောက်ပြလို၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနှင့် တရုတ် အစိုးရတို့ သိစေရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းအဖွဲ့၏ပြောခွင့်ရသူ အမျိုးသမီး မွန်းနေလီက ပြောသည်။
သူမက “ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေ တိုးလာတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို ထုတ်ပြန်လိုက် တာပါ။ ဒေသခံတွေဟာ ရွာတွေ မီးရှို့ခံရတာ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်။ အခု ဒုက္ခသည်များဆုံးရှိတာက မိုင်ဂျာယန်မှာပါ။ ၂သောင်းကျော်တယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ရပ်တန့်ပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပါ၀င်သော အမျိုး သားတန်းတူရေး အုပ်ချုပ်ခွင့်တို့ကို အခြေခံ၍ စစ်မှန်သော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကြီး ဖြစ်မြောက်လာရန် ရည်ရွယ်သည်ဟုလည်း သူမက ပြောသည်။
(ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ)အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကချင်ဒေသရှိ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုများကို စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ရန် ကုလသမဂ္ဂမှစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မရှင် တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရေး၊ မြန်မာအာဏာပိုင်နှင့် KIO/KIAတို့အား ညှိနှိုင်းပေးပြီး ကချင်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် လူထုအခြေအပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဒုက္ခသည် ၉သောင်းကျော်အား ကူညီပေးနိုင်ရေးတို့ကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ဆောင် ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။
တဆက်တည်း၌ပင် ကချင်ဒေသတွင် ထိုးစစ်ဆင်နေမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ရပ်တန့်၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များပါ၀င်သည့် ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ-UNFC နှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရန် ၎င်းအဖွဲ့က ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအား တောင်းဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသော ဒုက္ခသည်များကို တရုတ်အစိုးရ အနေဖြင့် အတင်းအဓမ္မ မောင်းထုတ်နေခြင်းများ ရပ်တန့်ပေးရန်လည်း (ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ)အဖွဲ့၏ ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းပါရှိသည်။
မွန်းနေလီက “တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီဒုက္ခသည်တွေကို ယာယီခိုလှုံခွင့်ပေးပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ စဉ်းစားထားတာရှိတယ်လို့ ပြောပေမယ့် အပြောပဲရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည်စခန်း ၅၀နှင့် ၈၀တွင် ဒုက္ခသည်ဦးရေ စုစုပေါင်း ၉သောင်းကျော်ရှိပြီး ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့များက အလားတူ ကြေညာချက်မျိုးကို မြန်မာအစိုးရနှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားပြည့်ဖြစ်သော ယခုနှစ် ဇွန်လကလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖားကန့်မြို့နယ် လောင်စာဆီ သိုလောင်ရုံတခု ပေါက်ကွဲ
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် အစိုးရတပ်တို့အကြား ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဖားကန့်မြို့နှင့် နှစ်မိုင်အကွာ ဆိုင်းဂျာဘွမ် ကျေးရွာရှိ ဝေအောင်ကမ္ဘာ အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီပိုင် လောင်စာဆီ သိုလောင်ရုံထဲသို့ လက်နက်ကြီး ကျကာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခလရ ၂၆၉ တပ်ဖွဲ့များနှင့် KIO ၏ တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၆ တပ်ဖွဲ့တို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ၂ နရီမှစတင်၍ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ညနေ ၅ နာရီခွဲချိန်တွင် အဆိုပါ သိုလောင်ရုံပေါက်ကွဲခဲ့သဖြင့် ဖားကန့်မြို့ တမြို့လုံး တုန်ခါသွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
“လက်နက်ကြီး သွားကျတာလေ။ ကျည်ဆံက ယမ်းတိုက်ပေါ်မှာ သွားကျတာ။ ဝေအောင်ကမ္ဘာ မိသားစု အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီလေ။ အဲဒီကုမ္ပဏီရှိတဲ့ နေရာက နှစ်ဖက် တပ်တွေရဲ့ အလယ်မှာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲတော့ ယမ်းတိုက်ပေါ်ကျတဲ့ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံက ဘယ်ဘက်က ကျည်ဆံဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ မရဘူးလေ” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဖားကန့်ရုံး တာဝန်ခံ ဦးခင်မောင်ချင်း က ပြောသည်။
ပေါက်ကွဲမှုနှင့် အနီးတဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများမှ ဒေသခံရွာသားများမှာ ဖားကန့်မြို့ပေါ် ပြောင်းရွှေ့သွားကြသဖြင့် ထိခိုက်သေဆုံးမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့လည်းပစ်၊ ကျနော်တို့လည်း ပစ်ဆိုတော့ ဂိုဒေါင်ထဲက ခဲယမ်းတွေ ပေါက်သွားတယ်။ ဒီမနက် ပြန်သွားကြည့်
တော့ အပိုင်းအစတွေပဲ တွေ့ရတယ်” ဟု KIO ၏ ရှေ့တန်းမှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။ ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်း
မြေတူးစက်ကြီး (ဘက်ဖိုး) ငါးစီးနှင့် တချို့ ကားကြီးများ အပါအဝင် ၁ဝ ထက်မနည်း ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားသည်ကို
တွေ့ရပြီး သေဆုံးမှုအချို့လည်း တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ဖားကန့်မြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ မဇ္စျိမက တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ “အဲဒါ ကျနော်တို့ မသိပါဘူးခင်ဗျာ” ဟု စခန်းမှ ဒု-ရဲအုပ် တဦးက ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားပြီးနောက် အရောင်းအဝယ်နှင့် စက်ယန္တယားများ ရပ်ဆိုင်းထားရသည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရ တပ်အင်အား ၃ဝဝ ခန့် ထိုးစစ်ဆင်လာရာမှ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ရှစ်နာရီကြာ တိုက်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး ၈ဝ ခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ ဗိုလ်မှူးတဦး၊ ဗျူဟာမှူးတဦး ကျဆုံးခဲ့သည်ဟု KIO အရာရှိက ဆိုသော်လည်း သီးခြား အတည်ပြုချက် မရယူနိုင်သေးပါ။
KIO တပ်နှင့် ပေ ၁,ဝဝဝ အကွာအဝေးရှိ မျောက်ဖြူကျေးရွာ အနီးတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ ရှိနေသဖြင့် နှစ်ဖက်တင်းမာ
နေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ထိုအရာရှိက ပြောသည်။
ဖားကန့်ရှိ ကုမ္ပဏီအချို့က KIO ၏ တပ်ရင်း ၆ လက်အောက်ခံ လမောင်ကုန်း စခန်းအား သိမ်းယူရန် နေပြည်တော်ထိ သွားရောက်၍ တိုက်တွန်းမှုများ ရှိသည်ဟု သတင်းရရှိကြောင်း “အကျိုးတူကုမ္ပဏီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ခြောက်ခုက ဒီနေရာကို ရှင်းပေးဖို့ နေပြည်တော်ထိ သွားပြောထားတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ကြေးစားလို စီးပွားရေး သမားတွေရဲ့ စကားကို နားထောင်ပြီး လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း စောင့်ကြည့်ပြီး ခုခံတိုက်နေတာ ခုလို ဖြစ်သွားတာပဲ” ဟု KIO အရာရှိက ပြောသည်။
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှစတင်၍ KIO တပ်နှင့် အစိုးရတပ်များအကြား တင်းမာမှုများ ရှိခဲ့ရာ မှော်မောင်ကုန်း၊
တောင်ပြို၊ သူဌေးချောင်း၊ ဆိုင်းဂျာဘွမ်၊ မနားချောင်း၊ ဗလခ၊ မှော်ဝမ်းကြီး၊ မှော်ဝမ်းကလေး၊ ရှရော်ခ၊ ဇွပ်ငိုင်၊
မျောက်ဖြူ၊ မှော်မောင်းလယန် စသည့် ရွာများမှ ဒုက္ခသည်များ ဖားကန့်မြို့ပေါ်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း များ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော ဒုက္ခသည်စခန်း ၃၁ တွင် လူဦးရေ ၉,ဝဝဝ ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဖားကန့် NLD ရုံးမှ ဦးခင်မောင်ချင်း က ပြောသည်။
NLD ပါတီက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန် ၂၇ဝ အိတ်နှင့် ကျပ်ငွေ ၂၈ သိန်းကျော် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဒေသခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသာ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနေသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှ အစိုးရ စစ်သားများ နေရပ်ပြန်ရန် စီစဉ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ကချင်ဒေသအတွင်း တွေ့ရသော အစိုးရ စစ်ကြောင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – Kachinnet)
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO)ထိန်းချုပ်နယ်မြေသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိလာသည့်် မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများ နေရပ်ပြန်နိုင်ရန် အတွက် စီစဉ်ပေးနေသည်။
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွန်မော် က“ဒီမှာရောက်နေတဲ့ သူတွေပြန်ဖို့ ILO က အဆက် အသွယ် လုပ်နေပြီ”ဟု ပြောပြသည်။
ယင်း အစီအစဉ်တွင် ကမ္ဘာ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်(ILO) က ကြားဝင်ဆောင်ရွက် ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း အသေးစိတ် အစီအစဉ်ကိုမူ မသိရှိရပေ။
KIO နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေသည့် အသက်ပြည့် စစ်သား၊ ကလေး စစ်သား စုစုပေါင်း ၄၀ နီးပါးရှိကြောင်း KIO ဘက်က သိရ သည်။
၎င်းတို့သည် နေရပ်ပြန်ပါက အရေးယူခံရမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် မပြန်ကြသေးဘဲ ဆက်လက် နေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆို သည်။
ပြန်လွှတ်လိုက်သည့် စစ်သားတချို့မှာ နေရပ်မပြန်တော့ဘဲ တရုတ်ပြည် နယ်စပ်မြို့များတွင် ဒေသခံတရုတ် လူမျိုးများ မလုပ်လို သည့် အလုပ်များတွင် လုပ်အားခ စျေးပေါပေါဖြင့် နေ့စား ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
KIO နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေသော ကလေး စစ်သား တဦးကလည်း “ပြန်ရင်တော့ ရန်ကုန်ပဲပြန်ရမှာပေါ့၊ အိမ်က လှိုင်သာယာမှာ၊ အခုရှိသေးလား မသိဘူး၊ တပ်ထဲ ရောက်သွားတာလည်း အိမ်ကမသိဘူး”ဟု ပြောသည်။
၎င်းမှာ ဧရာဝတီ တိုင်း မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ လာသည့် သဘောင်္တွင် စစ်သား အဖြစ် စုဆောင်းခြင်းခံရသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေသို့ ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများကို သုံ့ပန်း ဟု မသုံးနှုန်းဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ရှိ လာသည့် မြန်မာ့ တပ်မတော်သားများ ဟု KIO က သုံးနှုန်းသည်။
KIA နှင့် အစိုးရတပ်များသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းက စတင်၍ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၇ နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့သည့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်လည်း ပျက်ပြားသွားခဲ့ရသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ အရပ်သား ပြည်သူ ရ၅၀၀၀ ခန့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။
အစိုးရနှင့် KIO ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၂၀၁၁ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ နှင့် မတ်လတို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေ သော်လည်း ရေရာသည့် သဘောတူညီချက် တစုံတရာ မရရှိသေးဘဲ ရှိနေသည်။
SSPP/SSA နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည်ဟု သင်္ကာမကင်းဖြစ်သူများကို မြန်မာစစ်တပ်က ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးနေ
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ အမာခံလူဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးသွားသော နမ္မတူဒေသခံ စိုင်းကျော်အေးခေါ် အား ပြန်မလွှတ်ပေးသေး သည့် အပြင် သျှမ်းတပ်နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူများကို လိုက်ပြပေးရန်ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားသဖြင့် ဒေသခံများ စိတ်လက်မအေးဖြစ်နေရကြောင်း ဒေသခံများသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
၂၃ ရက်နေ့ကဖမ်းတဲ့ ပိန်းထော်(န်) ရွာသားစိုင်းကျော်အေးကို သူတို့စစ်ကြောင်းကိုလမ်းပြပေးဖို့ခေါ်သွားတယ်။ ပိန်းထော်န် ရွာသူကြီး စိုင်းအောင်ညွန့် ကိုလည်း ဖမ်းသွားတယ်။ ၂၇ ရက်မှာ ည၈ နာရီမန်စံရွာထဲ ဝင်တယ်။ နမ့်ပိုင်သူကြီး စိုင်းထွေး ညွန့်၊ ရွာသား စိုင်း၀ဏ္ဏကို ကိုထပ်ဖမ်းတယ်။ ၂၈ ရက်နေ့ ပန်လှ၊ ပန်ဆော့ရွာဖက် ဆက်သွားတယ်။ ဆန်ခါဘက်ဖြတ်သွား တော့ ဆန်ခါရွာသား တွေကို သူတို့ကို နားဟုတ် နောင်ငင်းရွာကိုပို့ခိုင်းတယ်။ ဆန်ခါမှာ ဗမာစစ်တပ် လူစုခွဲပြီး နောင်ငင်းကို ၉၄ ယောက် ရောက်တယ်။ ၂၉ ရက် နားဟုတ်ကနေ မန်စံတောင်ဖက်ဆင်း တယ်။ စိုင်းကျော်အေးနဲ့ စိုင်းအောင်ညွန့်ကို ဗမာ စစ်အင်္ကျီ နဲ့ ပုဆိုးနဲ့ဝတ်ပေးပြီး လက်ထိပ်ခတ်ြကီးနဲ့ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီစစ်သားတွေကျတော့ သျှမ်းစစ်သား ဝတ်စုံတွေ ဝတ်ကြတယ်လို့လဲ ရွာသားတချို့ပြောကြတယ် ” ဟု နမ္မတူသား စိုင်းခမ်းက ပြောသည်။
ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့က ပိန်းထော်န်ရွာသားစိုင်းကျော်အေးနှင့် နောင်အော့ရွာသား စိုင်းကမ်တို့ နှစ်ယောက် နမ္မတူမြို့နယ် ဝမ့်စန် ကျေးရွာအုပ်စုမှ နောင်အော့်ရွာသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အပြန် နောင်အော့ နတ်စင်အနီး၌ နမ္မတူအခြေစိုက် ၃၂၄ နှင့် နောင်ချိုအခြေစိုက် ၅၀၄ ပူးပေါင်းတပ် အင်အား ၁၀၀ ခန့်က ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှစ၍ ယနေ့တိုင် သင်္ကာမကင်းဖြစ်သူများကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မန်စန်ဒေသခံများက ပြောပါသည်။
အဆိုပါ မြန်မာစစ်တပ်၏ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်း ဝင်ရောက်မွှေနှောက်နေသော နယ်မြေများသည် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမရှိသေးသကဲ့သို့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်မှ ဝင်ရောက် ပြောဆို ဖြေရှင်းပေးခြင်းလည်းမရှိသေးကြောင်း စိုင်းခမ်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ် ဝမ့်ဟိုင်း မှ အရာရှိတဦးက အဆိုပါ အကြောင်း ကိစ္စမသိရှိရသေး ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
“ ဒီစစ်ကြောင်းတွေကနေ လူတွေလိုက်ဖမ်းနေတာ လွယ်လွယ်နဲ့ရပ်မယ်မထင်ဘူး။ စစ်သားတိုင်းဟာ သျှမ်းစကားကိုမွှတ် နေအောင်ပြောတတ်တယ်။ ရွာသားတွေကို သျှမ်းစစ်တပ်နဲ့ မပတ်သက်စေချင်တဲ့စီမံကိန်းနဲ့ ရှင်းလင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ဖမ်းသွားတဲ့လူတိုင်း ညိုမဲဒဏ်ရာတွေပြည့်နေတယ်လို့ မြင်တဲ့လူတွေက ပြောပြတယ်။ ဒီတိုင်းဆက်လုပ်နေမယ်ဆို ရင်တော့ မကြာခင်ရွာသားတွေ ပြောင်းကြရွှေ့ကြမယ့်အနေအထားမှာရှိတယ်” ဟု ခေတ်ပညာတတ် နမ္မတူလူငယ် တဦး ကလည်းပြောသည်။
ထိုသို့ ခြေလျင်စစ်ကြောင်းများအပြင် စစ်ယာဉ်တန်းဖြင့်လည်း လားရှိုးမှ နမ္မတူဘက်သို့ အင်အားပို့ဆောင်နေကြောင်း ဒေသ ခံများကပြော၏။
အဖမ်းခံရသူ၏ မိဘဆွေမျိုးများက စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့် ဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များမှတဆင့် အကူအညီတောင်းဆိုထားသော်လည်း ဗျူဟာမှူးများက တိုင်းမှလာသောအမိန်ဖြစ်သဖြင့် မတတ်နိုင်ကြောင်းသာ ပြန်ပြော သည်ဟု ဆို၏။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ဟုလူသိများသည့် သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA သည် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် ၂၀၁၂ ဂျန္နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့၌ ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရယူ ထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင် ရောက်လာမည့် ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းင်းတို့နှင့်နီးစပ်သော အသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါသည်။
စက်တင်ဘာလမှစတင်၍ပြည်ပ သို့ရောက်ရှိနေသည့် အတိုက်အခံအ ဖွဲ့အစည်းများက ခေါင်းဆောင်များ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးဝင်ရောက်မည့်သူများမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုမူးသာစသူတို့ပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းင်းတို့မှာ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် နေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲခန့်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မှတစ်ဆင့် လာရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပဏာမတွေ့ဆုံဆွေး နွေးမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော် ဌေးက “ကျွန်တော်တို့ မသိသေးပါ ဘူး။ သိရင် တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အ ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်မှာပါ” ဟု ပြောပါသည်။
ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင် ရောက်လာမည့်သူများမှာ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေများကို အနီးကပ်လေ့လာရန် ပြန်လာခြင်း၊ အပြီးအပိုင် နေထိုင်ရန် ပြန်လာ ခြင်းစသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းတို့ နှင့်နီးစပ်သော အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းတွင် ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအင်အားစုများအတတ် ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်များ ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လာရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ သည်။
ယခုအကြိမ်တွင် ပြန်လာသည့် အတိုက်အခံအင်အားစုများအား အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် တစ်ရက်တည်းအပြတ်တွေ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းတို့နှင့်နီးစပ်သည့် အသိုုင်းအဝိုင်းကပြောပါသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရင် ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ် (ဦးမိုးသီးဇွန်)
နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေရရင် အချိန်မေရွး ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာပဲ ကျရတာဝန်ကို လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ၈၈ အေရးတော်ပုံပေါ်မှာ ထင်းရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး လောလောဆယ် ပြည်ပမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဦးမိုးသီးဇွန်က ပြောပါတယ်။
ဦးမိုးသီးဇွန်နဲ့ ပြည်ပအေခြစိုက် ခေါင်းဆောင်တချို့ဟာ ၂၄ နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်ကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ သွားရောက်တော့မှာပါ။ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်မလဲ၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအေခြအေနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
၂၄ နှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာပြည်ကို ပထမဆုံးပြန်လေ့လာတဲ့ ခရီးစဉ်ဆိုတော့ အဓိက မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဘာတွေလုပ်မယ်၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဖို့ရှိပါလဲ။
“အဓိက ကျေနာ်တို့ သွားတာက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးအေပြာင်းအလဲ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ၊ ခေါင်းစဉ်တွေ ဆွေးနွေးဖို့ သွားတာပါ။”
ဘယ်လောက်အထိ လုပ်လို့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်လဲ။
“ဒါကေတာ့ အေခြအေနေတွ အားလုံးကို ကျေနာ်တို့ ကြည့်ရမှာပေါ့။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ အလွန်တရာမှ ကြီးကျယ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ။ ကျေနာ်တို့ တဖွဲ့တည်းနဲ့ လုပ်နိုင်မယ်လို့ မခံယူပါဘူး။ ကျေနာ်တို့ ရှိတဲ့အင်အားနဲ့လည်း မရပါဘူး။ တမျိုးသားလုံးပါ၀င်ပြီး လုပ်ဆောင်ရ မှာပေါ့။ အစိုးရေရာ၊ ဒီမိုကေရစီအင်အားစုေတွေရာ အကုန်လုံးအတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလုပ်ငန်းတွေက အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။”
ဦးမိုးသီးထွက်လာတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ် အချိန်တုန်းကေတာ့ တနိုင်ငံလုံး လှည်းေနေလှေအာင်း မြင်းဇောင်းမကျန် နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတယ်၊ နိုင်ငံရေးအသိတွေ ရှိနေကြတယ်။ အခုအေခြအေန အေနအထားရော ဘယ်လိုမျိုး ပြောလို့ရလဲ။
“အခုအေခြအေနကလည်း နိုင်ငံရေးနိုးကြားလာပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ အရင်ကနဲ့ မတူတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ်တုန်းက တစိုက်မတ်မတ် တောင်းရ တာလေ။ အခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရက စပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို သံန္နိဋ္ဌာန်ချပြီးတော့ လုပ်လာတယ်။ နောက်တခုက အထဲမှာလည်း ဒီမိုကေရစီအင်အားစုတွေက အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေကြားထဲက အေပြာင်းအလဲတွေကို ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ၈လေးလုံးတုန်းကေတာင်းလာတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ အစိုးရကလည်း ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုပဲ လုပ်ဆောင်နေတယ် ဆိုတော့ လူထုရဲ့ နိုးကြားလာမှုက ၈ လေးလုံးကနဲ့ အတူတူပဲလို့ ကျေနာ်အေနနဲ့ မြင်ပါတယ်။”
အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြင်ထားလဲဗျ။
“ခုနက ပြောသလို တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တိုင်းပြည်ပြန်လည် တည်ထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အဓိက ဦးစားပေးပြီး ဆွေးနွေးမှာပါ။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေ အတွက်လည်း ဒီမိုကေရစီ အင်အားစုနဲ့ရော အစိုးရနဲ့ရော အားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကျေနာ်တို့အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုပဲ ဆွေးနွေးတင်ပြမှာပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစု အားလုံးရဲ့ အမြင်တွေကို ကျေနာ်တို့ လေ့လာခွင့်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။”
ဘယ်အလို အေခြအေနေပးရင် ပြည်တွင်းထဲမှာ နေထိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးကို လုပ်မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားလဲ။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ်ကတည်းက တိုက်လာတာက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်ပြန်ဖို့၊ ကိုယ်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ပဲ။ ကျေနာ်တို့တွေကို နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေ ရမယ်ဆိုရင် အချိန်မေရွး ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ပြန်ပြီးတော့ ကျရာတာဝန်ကို လုပ်မှာပါ။ ကျေနာ်တို့ ပဏာမေဆွးနွေးနေတဲ့ ဦးအောင်မင်းနဲ့ တုန်းကလည်း ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စေတွ အားလုံးကို အဆင်ပြေမယ်လို့လည်း သူ့အေနနဲ့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ကျေနာ်တို့ အေနနဲ့လည်း မျှော်လင့်ထားတယ်။”
ပထမဦးဆုံး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်ရင် ဘာကို စလုပ်မလဲဗျ။
“ပထမဆုံး ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားချင်တယ်။ အင်းလျားကန်မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် နှင်းဆီပန်းလေးတွေ အင်းလျားကန်ထဲကို ချချင်တယ်။ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေ အတွက်ပေါ့။ နောက်ပြီး ၀န်ကြီးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်။ ရောက်ရောက်ချင်းကေတာ့ ၈၈ ပြည်တွင်းက အင်အားစုတွေက ကျေနာ်တို့ကို ဂီတေဖျာ်ဖြေမယ့်ပွဲမှာ သွားတက်မယ်။”
တခြား ဘာပြောချင်တာ ရှိလဲဗျ။
“အခု ကျေနာ်တို့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ကျေနာ်တို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ တမျိုးသားလုံးအတွက် မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခေတွ ညှိနှိုင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါ့မယ်။ ကျေနာ်တို့ကို အားပေးပါ။ ထောက်ခံပါ၊ ကူညီပါလို့ ကျေနာ့်အေနနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။”
မြန်မာပြည်သွားမည့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် မေးမြန်းချက်
ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္) ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၊ ေဒါက္တာနုိင္ေအာင္နဲ့ လူ့ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ အပါအ၀င္ ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ့အစည္းေတြရဲ့ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ့ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္း အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကုိ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အတြင္း ပထမဆုံး ျပန္ၾကမွာျဖစ္ျပီး အစုိးရက ၁ လဗီဇာ ခြင့္ျပုခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံ သြားေရာက္ရတဲ့ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းထားပါတယ္။
“အဓိက သြားရတဲ့ အေရးၾကီးဆံုး ရည္႐ြယ္ခ်က္က ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ ဘာလို့လဲဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွဘဲနဲ့ ဘယ္ေလာက္ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္လုပ္ တုိင္းျပည္က မတုိးတက္နုိင္ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ့ နြံထဲကေန မတက္နုိင္မခ်င္း က်ေနာ္တုိ့က ဒီအတုိင္းပဲ ဒုကၡေရာက္ေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဘယ္လုိနည္းလမ္း႐ွာမလဲ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ့ေတြနဲ့ က်ေနာ္တို့မိတ္ေဆြေတြ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးတယ္။ အဲလူေတြရဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ သိနုိင္နားလည္နုိင္တာ သူတို့နဲ့အတူေနခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တုိ့ပဲ႐ွိတယ္။ အဲ့ဘက္ပုိင္းေတြမွာ က်ေနာ္တုိ့က သူတို့ဘက္အျခမ္း ခံစားခ်က္ေတြကုိ သိတယ္။ ဒီဘက္အျခမ္းရဲ့ အျမင္ေတြကုိ ေမးမယ္။ ညွိလို့ရရင္ ညွိျပီးေတာ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ပထမဆံုးအဆင့္အေနနဲ့ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဒါပါ။”
“ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိုးေဆာင္ေတြ ေျပာတာကေတာ့ သမၼတက က်ေနာ္တို့နဲ့ ေတြ့နုိင္မယ္၊ လာပါေျပာတဲ့အေပၚမွာ သမၼတနဲ့ေတြ့ဖို့၊ အစုိးရထဲက တာ၀န္႐ွိတဲ့ ၀န္ၾကီးေတြနဲ့ ေတြ့ဖုိ့ဆိုတဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့ စီစဥ္ေပးမႈနဲ့သြားတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တုိ့ဘက္ကလည္း တင္ျပစရာရိွတာကုိ တင္ျပခြင့္ရမယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာသြားတာပါ။ တျပိုင္နက္ထဲမွာပဲ အထဲမွာ႐ွိတဲ့ နုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ့ေတြ့မယ္။ လူမႈအေျချပုအဖြဲ့အစည္းေတြနဲ့လည္း ေတြ့မယ္။ သူတုိ့ရဲ့ အသံေတြ၊ အျမင္ေတြ နားေထာင္ခ်င္တယ္။ တုိင္းျပည္ထဲမွာ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြအေပၚမွာ ေလ့လာခ်င္တာေပါ့။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးေရးနဲ့ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ေပါ့။”
“၃ ရက္ေန့ကုိ က်ေနာ္သြားမယ္။ အစုိးရပုိင္းနဲ့ ေတြ့မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ့ပါတီ ျပန္ျပီးေတာ့ ရပ္တည္တဲ့ကိစၥ အဓိကထားျပီး ေဆြးေနြးမယ္။ က်န္တဲ့အပုိင္းကေတာ့ ဟုိမွာ႐ွိတဲ့ လူ့ေဘာင္သစ္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီနဲ့ ေဆြးေနြးမယ္။ တျခားလူ့ေဘာင္သစ္ေတြနဲ့ ေတြ့မယ္၊ ၈၈ နဲ့ ေတြ့မယ္ ။ ေနာက္ တျခား ေတြ့သင့္ေတြ့ထုိက္တဲ့ နုိင္ငံေရးအဖြဲ့အစည္းေတြက လူေတြနဲ့ ေတြ့မယ္။ က်ေနာ့္ရဲ့ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ရဲ့ ပါတီ ျပန္လည္ရပ္တည္ခြင့္ကိစၥကုိ အဓိက ထားျပီး ေဆြးေနြးမယ္။”
တရုတ်ဖက်ခြမ်းမှ မပြောင်းရွှေ့ရသေးသော ခဒေါင်းပါစခန်းတွင် ၀မ်းရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွား
တရုတ်နိုင်ငံ နောင်တောင်းခရိုင်အတွင်း ခိုလှုံနေပြီး မိုးရာသီချိန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ရန် ကျန်ရှိနေသေးသော ခဒေါင်းပါ (Hka Dawng Pa) ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ၎င်းဒုက္ခသည်စခန်း ကျန်းမာရေးဌာနမှ ပြောသည်။
တရုတ်အာဏာပိုင်များက နေရပ်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းသောကြောင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နယ်မြေသို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့နေချိန်မှစ၍ ခဒေါင်းပါ (Hka Dawng Pa) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များ၌ ၀မ်းလျှော၊ ၀မ်းပျက်ရောဂါ ပိုမိုဖြစ်ပွားပြီး သေဆုံးမှုထိဖြစ်လာကြောင်း စခန်းတွင် ကျမ်းမာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေသူ ဆရာမ လုပါ (Lu Pa) က ပြောသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ပတ် စနေနေ့မှာ ၅ နှစ်အရွယ်မူကြိုကလေး တစ်ယောက် အထက်လှန်အောက်လျှောနဲ့ သေသွားတယ်။ နေ့ပိုင်းတောင်မှ အကောင်းပဲ အဲဒီည တစ်ညပဲဖြစ်ပြီးသေသွားတာ။ ၀မ်းလျှောတာတွေ ချောင်းဆိုးတာတွေ အရမ်းများတယ်။ တစ်နေ့ကို ၂၀ ယောက်လောက််ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ၀မ်းလျှောတာက ၁၀ ယောက်ကျော်တယ်။ ကျမအထင်က သူတို့အဲလိုဖြစ်တာ အိမ်သာက သန့်ရှင်းရေး သိပ်မရှိလို့ သူတို့အချင်းချင်းက ပြန်ကူးတာများတယ်” ဟု ဆရာမ လုပါက ပြောသည်။
၎င်းတို့အား စခန်းတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများက ကြည့်ရှုကုသပေးနေသော်လည်း ဆေးဝါးလုံလောက်မှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခင် နောင်တောင်းခရိုင်အတွင်း ဒုက္ခသည်စခန်း ၆ ခုရှိစဉ်က စခန်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျမ်းမာရေးဌာနများက ဆေးဝါးများကို အချိန်မှီကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ယခုတွင် စခန်း ၁ ခုသာကျန်နေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲများ ကြုံနေရခြင်းဖြစ်သည် ဟု အထက်ပါဆရာမ ဆက်ပြောသည်။
“ဆေးတွေလည်း မရှိတော့ဘူး ပြောင်းရွှေ့တာမလုပ်သေးတဲ့အချိန်တော့ ဇင်လွမ်း (Zin Lum) ကော်မတီက ကူညီနေတယ်။ အခုတော့ စခန်းတွေလည်း အကုန်ပြောင်းသွားတော့ ဇင်လွမ်းကော်မတီလည်း မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ဘယ်သူ့ဆီမှာ မတောင်းတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ HU တွေဆီမှာတော့ တောင်းထားတယ်။ လာပေးမယ်လို့တော့ ပြောတယ်။”
လန်ဒန်အခြေစိုက် HU (Health Unlimited) အဖွဲ့သည် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ကျန်းမာရေး ပြုစု ပညာပေး အစီစဉ်များလုပ်ဆောင်နေသည့် NGO အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ခဒေါင်းပါ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၁၂ ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၅၉၃ ရှိကာ ၄င်းတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသား စာရင်းသည် မူကြိုကလေးမှ စတုတ္ထတန်းထိ ၁၈၉ ဦးရှိကြောင်း စခန်းတာဝန်ရှိသူများပြောသည်။
တရုတ်အစိုးရမှ ခဒေါင်းပါ ဒုက္ခသည်စခန်းကို မိုးများရွာသွန်းနေချိန် ၎င်းစခန်းဘက်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သွားလာရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာမည့် တစ်လအတွင်းမူ အပြီးပြောင်းရွှေ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ခဒေါင်းပါ စခန်းတာဝန်ခံ ဆရာ ဂရောင်လွမ်း (Grawng Lum) က ပြောသည်။
“လမ်းမကောင်းလို့တဲ့ အခုတော့ မပြောင်းရသေးဘူး နည်းနည်းကြာအုံးမယ်တဲ့။ တစ်လလောက်တော့ ကြာမယ်ထင်တယ်။”
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်အတွင်း တရုတ်အစိုးရမှ နောင်တောင်း ခရိုင်အတွင်း ခိုလှုံနေသော ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းများကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) အုပ်ချုပ်နယ်မြေ လနာ့ဇွပ်ဂျာ (Lana Zup Ja) အတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ညွန်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဒုက္ခသည်များမှာ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်မှ ၂၅ ရက်ထိ အပြီး ပြောင်းရွှေ့ပြီဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်များသည် လနာ့ဇွပ်ဂျာတွင် နေရာမလုံလောက်သဖြင့် တချို့မှာ ဘွမ်စစ်ပါ (Bum Tsit Pa)၊ ဒွမ်ဘုတ် (Dum Buk) စသည့်ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။
သို့သော် လုံကရောက် (Lung Krawk) ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များသည် လနာ့ဇွပ်ဂျာသို့ မပြောင်းရွှေ့လိုသောကြောင့် ၎င်းစခန်း မျက်နှာချင်း နယ်စပ်ဖြစ်သော မြန်မာပြည်ဘက်ရှိ ကမ်းတလျှောက်တွင် စခန်းများဆောက်ကာ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ယခု ၎င်းတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သော နေရာသည် မံစီမြို့နယ် တရုတ်နယ်စပ် ခခေ (Hka Hkye) ကျေးရွာ အစွန်းတွင်ဖြစ်ကြောင်း လုံကရောက် စခန်းတာဝန်ခံ ဦးဒွဲလာ (Salang Doi La) ကပြောသည်။
“အစက ကျနော်တို့နေတဲ့ တရုတ်ပြည်ဘက်က စခန်းနဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက်ပဲ။ ဒီကနေ မြင်ရတယ်။ ဒီက အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေက ကိုယ့်ဒေသနဲ့နီးတဲ့ နေရာမှာပဲနေချင်တယ်တဲ့။ လနားဇွပ်ဘက်ကို မပြောင်းချင်ဘူး ဆိုပြီး ဒီမှာပဲ ပြောင်းနေကြတာပါ။ အရင်နေတဲ့ စခန်းကိုပဲ ဖြုတ်ပြီး ဒီဘက်ကို ၀ါးဖောင်နဲ့မျောယူပြီး ဒီမှာ စခန်းပြန်ဆောင်ပြီးနေတာလေ။ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဟိုဘက်ကမ်းကနေ ဒီဘက်ကမ်းကို အကုန်ပြောင်းကြပြီ” ဟု KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
လုံကရောက် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အိမ်ထောင်စု ၄၀၊ လူဦးရေ ၁၈၉ ဦး၊ စာသင်ကျောင်းကို မူကြိုမှ ဒုတိယတန်းထိဖွင့်ထားကာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ၂၅ ယောက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုချိန် နောင်တောင်းခရိုင်မှ ပြောင်းရွှေ့သွားကြသော ဒုက္ခသည်စခန်းအသီးသီးတွင် ၄င်းတို့အတွက် အစားအသောက်အတွက် အထောက်အပံ့ အကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်း စခန်းတာဝန်ရှိသူများပြောသည်။
အစိုးရတပ်များ ဖားကန့်ရှိ ကျေးရွာ ၁၁ ရွာရှိ ဒေသခံများအား တိမ်းရှောင်ရန် သတိပေးကြေငြာ
တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖါးကန့်မှ ထွက်ခွာရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ကုမ္ပဏီ စက်ယန္တယားများ။
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာမကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရာဒေသဖြစ်သော ဖားကန့်မြို့ရှိ ကျေးရွာ ၁၁ ရွာကို မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့များမှ အသံချဲ့စက်အသုံးပြုကာ မိမိနေအိမ်မှ ပစ္စည်းများတစ်ခု မကျန် သိမ်းဆည်းကာ ပြောင်းရွှေ့သွားရန် ယနေ့မနက်တွင် လိုက်လံသတိပေးပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားပြီးနောက် အစိုးရတပ်များမှ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်း မှော်မောင်းလယန်၊ မှော်မောင်ကုန်း၊ အင်ဗလခ၊ တောင်ပြို၊ မျောက်ဖြူ၊ ရှရော်ခ၊ ဆိုင်းဂျာဘွမ်၊ မနား၊ ကလောမှော်၊ ပီကျောင်၊ မှော်ဝမ်းကလေး စသည့်ကျေးရွာရှိဒေသခံများအား ပြောင်းရွှေ့ရန် သတိပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံတစ်ဦးပြောသည်။
“ဒီမနက် ၁ နာရီလောက်မှာ အဲလိုပြောတော့ ၂ နာရီခန့်ကတော့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး တစ်ရွာလုံးက လူတွေ ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးပြောင်းနေကြတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ဖားကန့်မြို့ ငှက်ပျောတော ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာ ရောက်နေတယ်။ ကျနော်တို့ရွာကတော့ အများပိုင်းက တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောင်းပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ အကုန်ပြောင်းတာက ဒီမနက်ပဲ။ ရွာမှာက ကျေးရွာကော်မတီ ၅ ယောက် ထက်ကျော်ပြီး မနေရဘူးတဲ့” ဟု မှော်မောင်းလယန်မှ ဒေသခံ တစ်ဦးကပြောသည်။
ယခုလို အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA နှစ်ဖက်စစ်ရေးအရှိန်မြင့်နေချိန် မြန်မာအစိုးရတပ်မှ ထိုသို့ ကျေးရွာများအား ပြောင်းရွှေ့ကြရန် ပြောဆို သတိပေးခြင်းသည် မကြာမီ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လာမည့် အလားအလာရှိကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံများ သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြသည်။
လတ်တလောတိုက်ပွဲများတွင် အစိုးရတပ်များ အင်အားများထပ်မံတိုးချဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီး ရဟတ်ယာဉ်များလည်းအသုံးပြုလာကြောင်း KIO သတင်းအရသိရသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ဖားကန့်ရှိကျေးရွာများဖြစ်သော မှော်မောင်းလယန်၊ တောင်ပြို၊ ဗလခ၊ မျောက်ဖြူ၊ ရှရော်ခ၊ ဆိုင်းဂျာဘွမ်၊ ဆွတ်နန်ကောင်၊ စဗိခူး၊ မော်ဝမ်းကြီး၊ မော်ဝမ်းကလေး၊ မော်မောဘွမ်၊ မနားချောင်း၊ ကလောမှော်၊ ပီကျောင် စသည့်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များသည် လုံခြုံရာ ဖားကန့်မြို့ပေါ်သို့့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသည်။
ထိုသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသော ဒုက္ခသည်များသည် ထပ်၍တိုးလာနေသောကြောင့် ယခုချိန်တွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး ၄င်းတို့အတွက် အရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့များလိုအပ်နေကြောင်း ဒုက္ခသည်များအား ကူညီပေးသူများပြောသည်။
ယခုချိန်တွင် ဒုက္ခသည်များကို အသင်းတော်များနှင့် ကျောက်ကုန်သည် လောပန်းအချို့ ကူညီနေပြီး အကူညီမှုများဆက်လက်လိုအပ်နေချိန်တွင် နောက်ထပ် ကျေးရွာ ၁၁ ရွာမှ ဒေသခံများကို တိမ်းရှောင်သွားကြရန် အစိုးရစစ်တပ်မှ လိုက်လံသတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖားကန့်ဒေသသည် အဖိုးတန်ကျောက်စိမ်းများ ထွက်ရှိရာ ဒေသဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးရရှိသောဒေသလည်းဖြစ်ကာ တူးဖော်ရရှိသောကျောက်များကို ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ကျောက်မျက်ရတနာအရောင်းပြပွဲများ နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ပြီး တနှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းချီဝင်ရရှိသောနေရာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်အတွက် JICA က ကျပ်သန်း ၉၉၀၀ ချေးမည်
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နယ်အတွင်းမှ ဒေသခံကလေးငယ်များ (ဓာတ်ပုံ – ခိုးနူမ်းထုန်)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခုအနက် အဆင်းရဲဆုံးဖြစ်သော ချင်းပြည်နယ်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (Japan International Cooperation Agency – JICA) က ကျပ်ငွေ သန်း ၉၉၀၀ ခန့် ထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် JICA က ချပေးမည့် ချေးငွေကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှတဆင့် အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးဗန်ထောင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ပြည်ထောင်စု အစိုးရကနေပြီးတော့မှ ချပေးတာ။ ဒီလိုဒီလို ချေးငွေတွေရှိတယ်၊ ဘာတွေလုပ်ချင်သလဲ၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ချင်သလဲ ဆိုတာကို Proposal တင်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီမှာ ဒီလိုဒီလောက် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပြောပြချက်အရ ကျနော်တို့က သိရတာပါ” ဟု ဦးဗန်ထောင်း က ဆိုသည်။
JICA အနေဖြင့် အဆိုပါချေးငွေကို အတိုးနှုန်း ၀ ဒဿမ ၀၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှတဆင့် ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ချပေးနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားပြီး ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် ချင်းပြည်နယ်သို့ JICA အဖွဲ့ဝင်များ ကွင်းဆင်းလေ့လာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဗန်ထောင်းက ဆက်ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အတွက် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး အစီအစဉ်ဖြင့် ကျပ်ငွေ သန်း ၃၀၀၀ ချပေးထားကြောင်း၊ ထိုငွေများကို စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် တခြား ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး နေရာများအတွက် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“စိုက်ပျိုးရေးမှာဆိုရင် လှေကားထစ်တွေ တူးဖော်တဲ့နေရာတွေ၊ စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရေးတွေမှာ သုံးတယ်။ ကျန်းမာရေးမှာ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ရေးတွေ၊ နောက် စာသင်ကျောင်းဆောင်တွေ၊ ကျေးလက်သောက်သုံးရေ ရရှိရေး၊ ကျေးလက်မီးလင်းရေးတွေမှာ သုံးတယ်။ အခုဟာက ပံ့ပိုးထောက်ပ့ံမှုဆိုတော့ တဦးချင်း ထောက်ပံ့မှု မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူအများကို အကျိုးပြုတဲ့ဟာတွေမှာ ထောက်ပ့ံတဲ့ သဘောပါ” ဟု ဦးဗန်ထောင်း က ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ချင်းပြည်နယ််အတွင်း၌ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှု၊ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှုတို့ကြောင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းများသည် အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင် မလေးရှားနိုင်ငံများသို့ ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြရကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် အိုက်ဇောမြို့အခြေစိုက် ခိုးနူမ်းထုန် (ချင်းသတင်းဌာန) မှ လက်ထောက်အယ်ဒီတာ ဆလိုင်းရောဘတ်က ဆိုသည်။
“အလုပ်အကိုင်ကရှားတော့ လူငယ်တွေ တော်တော်များများက ချင်းပြည်နယ်မှာမှ မရှိကြတော့တာ။ တချို့က အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက် ထွက်လာတယ်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ လူတွေကျတော့ မလေးရှားတို့ ဘာတို့ကို ထွက်ကြတာပေါ့၊ တော်တော်များများကတော့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ့တော့ ပညာရေးကိုလည်း အားမပေးနိုင်တော့ဘူး” ဟု ဆလိုင်းရောဘတ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ပြဿနာမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းမှာ အလုပ်လက်မဲ့ များပြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီ ရယူ၍ ဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလက ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။
NLD ပါတီ အနေဖြင့်လည်း ဗြိတိန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီပေးရေး ဌာန (Department for International Development- DFID) ၏ အကူအညီဖြင့် ပြုလုပ်သော ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးအတွက် အခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းတချို့တွင် စတင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံအတွင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု အဖြစ်အများဆုံးစာရင်း၌ ရှိနေသည့် ချင်းပြည်နယ်ထဲတွင် စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၅ သိန်း ၄ သောင်းခန့် နေထိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြကြောင်း၊ ပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ်ပေါင်း ၉ မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲ ၄ ခုရှိပြီး ခရိုင် ၃ ခုရှိကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ မှတ်တမ်း အချက်လက်များအရ သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ယခုနှစ်ထုတ်ပြန်ထားချက်များအရ ချင်းပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူ လူဦးရေ၏ ရ၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အတူ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် (UNDP) ၏ စစ်တမ်း ကောက်ယူချက်အရ ချင်းပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်း ၁၄ ခုအနက် ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးနှင့် အဆင်းရဲဆုံး ပြည်နယ် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင်းနေထိုင်သူ ဒေသခံများသည် စပါး၊ ပြောင်းဖူး၊ ပဲစင်းငုံနှင့် ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုးသည့်အပြင် အသားတု အဖြစ် အသုံးပြုသော ဝဥများကိုလည်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြကြောင်း၊ JICA မှ ချေးငွေများ ရရှိပါက စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးတို့တွင် အဓိကထား လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဗန်ထောင်းက ပြောသည်။
JICA အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် အခြေစိုက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်းရေး ကဏ္ဍများတွင် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ထိုအဖွဲ့သည် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း၌ လူမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားရေးအတွက် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီအလိုက် အသုံးဝင်သီးနှံ စိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆေးဘက်ဝင် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးရေး၊ တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မှု ပပျောက်ရေးနှင့် သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဂျပန်ယန်းငွေ သန်း ၅၀ ထောက်ပံ့၍ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်း JICA အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တနိုင်ငံလုံး ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျော့ချနိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထား၍ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားသွားသည်။
၄၁နှစ်ပြည့် မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နေ့ NMSP ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပ
သြဂုတ်လ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းယဉ် (ကေအိုင်စီ)
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၉ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ၄၁နှစ်ပြည့် မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နေ့ကို ရေးချောင်းဖျား ဒေသရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ-(NMSP) ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
အခမ်းအနားသို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန်၊ ဒုဥက္ကဌ နိုင်ရော့စ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး နိုင်အောင်မင်း၊ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် လယီဂကောင်း အပါအဝင် မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အင်အား ၁၀၀ကျော် တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ကလေးစစ်သား အသုံးမပြုရန် ဂျီနီဗါသဘောတူညီချက်ကို အခမ်းအနားတက်ရောက်လာခဲ့သည့် တပ်မှူးတပ်သားများ နှင့် ပါတီတာဝန်ရှိတို့ကို ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနှင့် Geneva Call စာချုပ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်ခြေတပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များကိုလည်း ရှင်းလင်းသွားမည်ဟု သိရသည်။
“Geneva Call နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ အချက် (၁၆)နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရှင်းပြ တယ်။ တခြားတပ်ရင်းတွေအတွက်လည်း လောလောဆယ် Geneva Call စာချုပ်ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး မွန်လိုပြန်ထားပြီးတော့ တပ်ရင်း တိုင်း၊ မြို့နယ်တိုင်း၊ ခရိုင်တိုင်းမှာ ဖြန့်ဖို့ရှိတယ်။ နောက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကိုလည်း နယ်ကိုပြန်ဖြန့်ဖို့ ရှိပါ တယ်”ဟု ဗဟိုစစ်ကော်မတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်လယီဂကောင်းက ပြောသည်။
Geneva Call စာချုပ်ပါအချက်အလက်များကို အောက်ခြေအဆင့်ထိ ရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်သလို ဘဝတူတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ကိုလည်း စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်အောင် တိုက်တွန်းသွားမည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
အသက် (၁၈)နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များကို စစ်မှုမထမ်းခိုင်းရေးအတွက် ဂျီနီဗာ သဘောတူညီချက်ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)တို့က သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းခန့်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့ မြို့တော်ခမ်းမတွင် တရား ဝင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် ၁၉၉၅ခုနှစ်က စစ်အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းလဲရေးကို လက်မခံခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပျက်ပြယ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် မြန်မာအစိုးရ ရထားပို့ဆောင်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမသဘော တူညီချက် ၅ချက်ဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီလက်အောက်ခံ မွန်အမျိုးသားတပ်မတော်ကို ၁၉၇၁ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၉ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ရှိနေဆဲ
အစိုးရက နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကတိပြုနေသော်လည်း ကရင် ပြည် နယ် အတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ သုံးပုံ တပုံခန့်သည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ခံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ တဖွဲ့က ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်သည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် အိုးအိမ်ပစ်ခွာ တိမ်းရှောင်ရသူတချို့ကို ကရင်ပြည်နယ်တနေရာတွင် ယမန်နှစ်က တွေ့ရစဉ်။ ပြည်တွင်း ၌ တိမ်းရှောင် နေသူများ ရှိသကဲ့သို့ နယ်စပ်ဒေသ ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ ထွက်ပြေးရသူများလည်း အများအပြား ရှိနေသည် (ဓာတ်ပုံ – FBR)
အမေရိကန် အခြေစိုက် Physicians for Human Rights(PHR) အဖွဲ့က ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်သည့်“Bitter Wounds and Lost Dreams: Human Rights Under Assault in Karen State, Burma” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာတွင် ထိုသို့ ဖော်ပြထားသည်။
PHR အနေနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူသူ ၂၂ ဦးကို သင်တန်းပေးပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကရင်ပြည်နယ်၌ စစ်တမ်း ကောက်ယူ၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာပါ ယင်း အစီရင်ခံစာတွင် ကျေးရွာပေါင်း ၈၈ ရွာ မှ မိသားစုဝင် ၆၆၅ ဦးကို မေးမြန်း၍ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို ၆၆၅ ဦးကို ကောက်ယူခဲ့သည့် စစ်တမ်းတွင် အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေ ခံရခြင်း၊ ပေါ်တာ ထမ်းပေးရခြင်း၊ မြေမြှုပ်မိုင်းများ ရှင်း လင်းပေးရခြင်း စသည့် လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး စံချိန် စံညွှန်း သတ်မှတ်ထားသော မေးခွန်း ၉၃ ခုကို မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း အစီရင်ခံစာ၌ အစိုးရ စစ်တပ်၏ အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုများ၊ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုများ၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများနှင့် ပတ်သက် သည့် စစ်တမ်း ကောက်ယူမှုများလည်း ပါ၀င်သည်။
အထူးသဖြင့် အစိုးရ စစ်တပ် ထိန်းချုပ်သည့် ဒေသများအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများသည် တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် အစိုးရစစ်တပ် အကြား အခြေအနေတင်းမာနေသော နေရာများထက် ၈ ဆ နီးပါး ပိုများကြောင်း အစီရင်ခံစာ က ဆိုသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများ လုပ်ပြနေသော်လည်း အစိုးရ စစ်တပ် ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများက ကရင်ပြည်သူများကို ခြောက်လှန့်နေကြောင်း လည်း အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် တိုက်ခိုက်နေသော ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU)နှင့် အစိုးရ တို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
လတ်တလောတွင် ကရင်ပြည်နယ် အနှ့ံအပြားနှင့် နယ်စွန်နယ်ဖျားရှိ အစိုးရ စစ်အခြေစိုက် စခန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး ခြေလျင်တပ်ရင်း ၃၈ ခုဖြင့် အခိုင်အမာ တပ်ချထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသော်လည်း အရပ်သား ပြည်သူများသည် စစ်တပ်က ၎င်းတို့အား အတင်းအကျပ် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ ခိုင်းခြင်း၊ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေခြင်းနှင့် သွားလာရေးတို့ကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခံစားနေရသည်”ဟုလည်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
PHR က အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ အသင်း(FCCT) တွင် ယမန် နေ့ က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကရင် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ (KHRG)မှ Khu Khu Ju က ကရင် ဒေသခံများ ၏ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေခံရခြင်း အပါအဝင် အစိုးရ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နှင့် ပတ်သက်သည့် စီမံကိန်းများကြောင့် လူ့ အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများလည်း ပါ၀င်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“အခုလက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေတယ်၊ ဆွေးနွေးနေတာက ရေရှည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးပေးမှာ မဟုတ် ဘူး၊ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဟာလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အခြေအနေ တိုးတက်လာအောင် အာမခံချက်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါတွေကြောင့် အခြေခံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”ဟု Khu Khu Ju က ဆက်ပြောသည်။
PHR အစီရင်ခံစာ၌ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ် ရေနက် ဆိပ်ကမ်းနှင့် စီးပွားရေးဇုန် တဝိုက်တွင်လည်း ဒေသခံများကို လုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုများ၊ သွားလာရေး ကန့်သတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်းများသည်လည်း တခြားသော လေ့လာဆန်းစစ်သည့် နေရာများထက် ၂ ဆမှ ၈ ဆ အထိ ပမာဏာ ပိုမိုမြင့်မားနေကြောင်း ပါရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်(ILO)အနေနှင့်လည်း လှုပ်ရှားမှုများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်မြို့ထက် ကျော်လွန်၍ ကရင်ပြည် နယ် ကျေးလက်ဒေသများ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများထံသို့ပါမကျန် ရောက်ရှိစေရန်နှင့် အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေ ခံရသူများ အနေနှင့် အစီရင်ခံစာ တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း PHR က တိုက်တွန်းထားသည်။
အစိုးရ၏ မတရား ထိုးစစ်ဆင်မှုရပ်တန့်ရေးနှင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုအပေါ် ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
အစိုးရစစ်တပ်နှင့် KIO/KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ ပဋိပက္ခကြား အစိုးရစစ်တပ်မှ တစ်နှစ်ကျော်တိုင်အောင် အင်အားအလွန်အကျွံသုံး၍ အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်စွာဖြင့် မတရားထိုးစစ်ဆင်ခိုက်မှုများ အစိုးရဖက်မှ ရပ်တန့်ပေးရန်နှင့် ၄င်းပဋိပက္ခကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ယနေ့ သြဂုတ်လ(၂၉)ရက်တွင် ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများမှ သဘောထားကြေညာချက် တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများမှ သဘောထားထုတ်ပြန် ကြေညာချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကချင်တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူငယ်များ သမဂ္ဂ ( All Kachan Studends and Youth Union – AKSYU )၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုနော်ဆန်းက " ဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အစိုးရဘက်မှ မတရားထိုးစစ်ဆင်မှုတွေ ရပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် (၉၀,၀၀၀) ကျော်ရှိနေပြီလေ။ အဲဒီစစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်။ အဲဒါကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမှ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှလည်း နိုင်ငံအတွင်းမှာ တရားမျှတမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တရုတ်နယ်စပ်တွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် တိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေကို တရုတ်မှ အတင်းအဓမ္မ မောင်းထုတ်ခြင်းကို လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ ရပ်တန့်ပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။ " ဟု အာရ်ကန်တိုင်းမ်စ်သို့ ပြောသည်။
အစိုးရစစ်တပ်၏ မတရားထိုးစစ်ဆင်မှု ရပ်တန့်ရေးနှင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ကချင်ပြည်သူလူထုနှင့်တကွ မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသည် ကချင်ဒေသအတွင်း အစိုးရစစ်တပ်၏ မတရားထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်တန့်ပေးရန် အကြိမ်အကြိမ် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အစိုးရစစ်တပ်မှ အင်အား အလွန်အကျွံသုံး၍ အစဉ်မပြတ် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကို တစ်နှစ်ကျော်တိုင်အောင် အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်စွာဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ကချင်ပြည်သူလူထုတို့သည် ကြောက်ရွံ ့ထိတ်လန့်စွာ မိမိတို့နေထိုင်ရာအရပ်ဒေသမှ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးသွားလာသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အရေအတွက်မှာ (၉၀,၀၀၀) ကျော်လာပြီဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရစစ်တပ်မှ ကချင်ဒေသများ၌ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုဖေါ်ဆောင်မည့် စစ်မှန်သော နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)/ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KIA) အပါအဝင်တပြိုင်နက်တည်း တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ အားလုံးနှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအကြား စတင်နိုင်ရန်အတွက် ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများမှ အောက်ပါအတိုင်း တောင်းဆို အပ်ပါသည်။
(၁) ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့် KIO/KIA စစ်စခန်းများကို ဦးတည်ပြီး ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် တပ်ရင်းပေါင်း(၈၀)ကျော်တို့၏ မတရားထိုးစစ်တိုက်ခိုက်မှုကြီးများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးရန်နှင့် မြန်မာတပ်မတော်အနေဖြင့် မိမိတို့ မူလအခြေစိုက်ရာ မိခင်တပ်ရင်း၊ တပ်မ ဒေသများထံသို့ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားရန်။
(၂) မြန်မာတပ်မတော်၏ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုသည် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် KIO/KIA အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများအားလုံး၏ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်သောကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ကချင်ထိုးစစ်ဆင်မှုရပ်တန့်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာသော ရှေ့တန်းရှိ စစ်တပ်များကို ထိရောက်စွာအရေးယူပေးရန်။
(၃) ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အခြေခံအရင်းအမြစ် ပြဿနာများဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးတို့ကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် KIO/KIA တို့အကြား စစ်မှန်သောနိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အဖြေရှာပါရန်။
(၄) လက်ရှိ စစ်ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများသာမက မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) တို့အကြား စစ်မှန်သောနိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အဖြေရှာပါရန်။
(၅) ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်အပါအဝင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ၊ ဒေသခံ ကချင်ပြည်သူလူထုများအပေါ် စရဖ၊ စစ်တပ်နှင့် ဒေသခံအာဏာပိုင်များမှ KIO/KIA နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု မတရားစွပ်စွဲပြီးခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် လူမဆန်စွာဖြင့်ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုလုပ်ရပ်များကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးပါရန်။
(၆) စစ်ပဋ္ဋိပက္ခဒေသအတွင်းရှိ ဒေသခံအမျိုးသမီးများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မြန်မာစစ်တပ်၏ မတရား အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းခံရသူပေါင်း(၆၃)ဦးတွင် ထက်ဝက်ခန့်မှာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရမှုများ (KWAT စစ်တမ်းအရ)၊ ၄င်းအမှုများကို စနစ်တကျ စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်အရေးယူခြင်းကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးပါရန်။
(၇) ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမိသားစု၊ ဒေသခံကချင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများတို့၏ စစ်ပဋ္ဋိပက္ခကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနေရသူ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် (၉၀,၀၀၀)ကျော်အတွက် လိုအပ်သောအရေးပေါ် အကူအညီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်များ လွတ်လွပ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုပေးပါရန်။
(၁) ဒေသခံလူထု၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှု ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးနှင့် အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွှတ်ခွင့် ရပ်တန့်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ယန္တရားများ ဖွဲ့စည်းထားရှိရေးကို တိုက်တွန်းပေးရန်။
(၂) စစ်ပဋ္ဋိပက္ခဒေသအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်(၉၀,၀၀၀) ကျော်အတွက် လူသားချင်း စာနာထာက်ထားသော အရေးပေါ်အကူအညီများ ပို့ဆောင်ခွင့်ပြုရေးကို မြန်မာအာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းအပြင် KIO/KIA၊ ကချင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထုအခြေအပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန််။
(၃) စစ်ပွဲပဋ္ဋိပက္ခကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းနှင့် အစိုးရစစ်တပ်မှ ဆန်စပါးသယ်ယူခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် ပူတာအို၊ မချမ်းဘော၊ နောင်မွန်နှင့် ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်များရှိ ဒေသခံများမှာ ဇူလှိုင်လမှစတင်ပြီး ဆန်စပါးရှားပါးမှုကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်နေသော ပြည်သူများအတွက် အရေးပေါ်အကူအညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရသို့
(၁) တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိစစ်ပဋ္ဋိပက္ခကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို တရုတ်နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းမှ အတင်းအဓမ္မမောင်းထုတ်နေခြင်းမှ ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသော အရေးပေါ်အကူအညီများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။
(၂) တရုတ်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် စစ်ပဋ္ဋိပက္ခများကြောင့် တရုတ်နယ်စပ် ဒေသတလျှောက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသော ကချင်ဒုက္ခသည်များ၏ လုံခြုံရေးနှင့် နေရာချထားရေးများအတွက် KIO/KIA၊ ကချင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးပါရန်။
1. All Kachin Students and Youth Union
2. Kachin Center (Thailand)
3. Kachin Development Network Group
4. Kachin Environmental Organization
5. Kachin Women's Association- Thailand
6. Kachin News Group
7. Pan Kachin Development Society
8. Kachin Community in United Kingdom
9. Kachin National Organization
10. Queensland Kachin Community
11. Kachin Association of Australia
1. Naw San, +66 (0) 848119594 2. Moon Nay Li, +66 (0) 856251912 3. Hkahpa Tu Sadan, +4(0) 7538258961
Date: 2012 August 29th
ထိုးစစ်ဆင် ရှေ့တန်းတပ်များကို သမ္မတ အရေးယူရန် ကချင်များ တောင်းဆို
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ)။ ။ သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်အား မလိုက်နာဘဲ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ထိုးစစ်များ ဆင်နွှဲလျက်ရှိသည့် အစိုးရ ရှေ့တန်းတပ်များကို “ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရန်” ကချင်အဖွဲ့့အစည်းများက တောင်းဆိုလိုက်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကချင် အဖွဲ့အစည်း ၁၁ ဖွဲ့၏ ကြေညာချက်တွင် “KIO/KIA တပ်စခန်းများကို ဦးတည်ပြီး ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် တပ်ရင်းပေါင်း ၈၀ ကျော်တို့၏ မတရား ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုကြီးများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးရန်” တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ထိုးစစ်များ မဆင်နွှဲရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်္ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ညွှန်ကြားထားသော်လည်း ထိုးစစ်များ ပြင်းထန်လာနေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ကချင် ကျောင်းသား လူငယ်များသမဂ္ဂ (AKSYU) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကိုနော်ဆန့် က ပြောသည်။
“ထိုးစစ်ကတော့ ပိုပိုပြီး ဆင်လာတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ အဲဒါကို သမ္မတအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုတယ်။ ညွန်ကြားချက် မလိုက်နာရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ ဘယ်လို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမလဲ၊ ဘယ်အတိုင်းအတာ၊ ဘယ်အချိန်ကာလထိ ဒါကို ခွင့်ပြုဦးမှာလဲဆိုတာ စနစ်တကျနဲ့ သေသေချာချာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့ လိုလာတာပေါ့” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ကချင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNO)၊ ကချင် အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWAT)၊ ကချင် သတင်းဌာန (KNG)၊ ကချင် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် KDNG၊ ကချင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ KEO တို့ အပါအဝင် ကချင် ၁၁ ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းစစ်၏ အရင်းခံပြဿနာများကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် အစိုးရအကြား “စစ်မှန်သော နိုင်ငံရေး
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်” အဖြေရှာရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရန်လည်း ကုလသမဂ္ဂနှင့်
စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၉၀,၀၀၀ ကျော်အတွက် ကုလမှ အကူအညီများပေးနိုင်ရေး အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကာ ကချင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လည်း တောင်းဆိုကြသည်။
“ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့တော့ လက်ရှိ အခြေအနေထိ ကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တော်တော် အားနည်းနေတယ်။ မရှိသလောက်ပဲ။ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဥပမာ တရုတ် အစိုးရနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလည်း လုံးဝမရှိသလောက် တွေ့နေရတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အတွက် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုနော်ဆန့် က ပြောသည်။
တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွင် နေထိုင်နေသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား အတင်းအဓမ္မ
မောင်းထုတ်နေခြင်းမှ ရပ်တန့်ပြီး အကူအညီများ ပေးရန် တရုတ်အာဏာပိုင်များအား ကချင်အဖွဲ့များက တောင်းဆိုထားသည်။
ကချင်ဒုက္ခသည်တွေကို နယ်စပ်ဖွင့်ပေးဖို့ တရုတ်ကို အမေရိကန်တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့ အရပ်သား ဒုက္ခသည်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်က လက်ခံအကူအညီပေးဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တရုတ်နိုင်ငံကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတဲ့ ကြားကပဲ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့် အရပ်သားတွေ ထွက်ပြေးရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က သူ့နိုင်ငံတွင်း မဝင်နိုင်အောင် နယ်စပ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ သတင်းတွေ ဖြစ်နေ တာပါ။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ မအေးသန္တာကျော်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြားမှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ ဆက်ပြီး လုပ်နေကြပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ အရှိန်ကတော့ ရပ်မသွားသေးပါဘူး။ အဓိကအားဖြင့် နယ်မြေသတ်မှတ်မှု စစ်ရေးကိစ္စတွေမှာ နှစ်ဘက် တင်းတင်း မာမာ ရှိနေကြပါတယ်။ အခုလို စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံ အရပ်သားတွေ မိမိတို့ကျေးရွာတွေကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရာမှာ နယ်ချင်းစပ် တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလည်း ကူးကြပါတယ်။
ကနဦးပိုင်းမှာ တရုတ်ဘက်က လက်ခံထားပေမယ့်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ကချင်အရပ်သား ဒုက္ခ သည်တွေ နေရပ်ကို ပြန်ဖို့ တရုတ်အာဏာပို်င်တွေဘက်က ဖိအားပေးမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒုက္ခသည်သစ်တွေကိုလည်း လက်မခံဘဲ နယ်စပ်မျဉ်းကို ပိတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခြားတဘက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကုလသမဂ္ဂဘက် က အကူအညီပေးဖို့လည်း အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ဒီ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် တရုတ်ဘက်က နယ်စပ်ဖွင့်ပေးဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တိုက်တွန်းနေတာပါ။
“အဲဒီဒေသတွေမှာ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနိုင်အောင် နယ်စပ်ဖွင့်ပေးထားဖို့ တရုတ်ကို တိုက်တွန်း နေပါတယ်။ အလားတူပဲ စစ်ပွဲတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ထွက်ပြေးကြရတဲ့ အရပ်သားတွေကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ကူညီနိုင်အောင်လည်း မြန်မာအစိုးကို တိုက်တွန်းနေတာရှိပါတယ်။”
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူ Vitoria Nuland ပြောသွားတာပါ။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်အောင် မြန်မာအစိုးရကိုရော အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံကိုပါ အမေရိကန်ဘက်က တိုက်တွန်းဆွေးနွေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အဲဒီနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ပြီး သူတို့ကိုလည်း နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်း စဉ်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်း ပါ၀င်စေဖို့ မြန်မာအစိုးရကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ တဘက်မှာလည်း မြန်မာနို်င်ငံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရုတ်နဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါမှာ တရုတ်အနေနဲ့ အရပ်သားဒုက္ခသည်တွေ အတွက် နယ်စပ်တံခါးတွေ ဖွင့်ထားပေးဖို့၊ နောက်.. အဲဒီမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ရေး မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ ကို ကူညီဖို့ ကျမတို့ အမြဲတမ်း တရုတ်ကို တိုက်တွန်းနေပါတယ်။”
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်းမှာ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နဲ့ မြန်မာအစိုးရ တပ်တွေ အကြား တိုက်ပွဲတွေ နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေရာမှာ တနေ့ညကတော့ တိုက်ပွဲအခြေ အနေ တော်တော်လေး ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲအတွင်း ပစ်ခတ်တဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်တွေဟာ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်း ရွာတွေမှာပါ ကျရောက်တဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေ ထပ်မံ ထွက်ပြေးတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အစိုးရဘက်က လက်နက်ကြီးအပါအဝင် လေကြောင်း အကူတွေပါ ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေ ညကတည်းက ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်လို့ ကချင်တိုင်းရင်း သူ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်မှာကတည်းက KIA နဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေအကြား တိုက်ပွဲတွေ စ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တနှစ်ကျော်ကြာ လာပြီဖြစ်တဲ့ ဒီတိုက်ပွဲတွေအကြောင့် ထွက်ပြေးကြရတဲ့ ဒုက္ခသည် အရေအတွက်ဆိုရင်လည်း တစ်သိန်း နီးပါး ရှိသွားပြီဖြစ်သလို လက်နက်မဲ့ အရပ်သားတွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာလည်း ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေရော၊ ဒုက္ခသည်အရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပါ ပြောဆိုကြပါတယ်။
KIO နဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြား ၁၇ နှစ်ကြာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပြီး ပျက်ပြယ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်စဲရေး နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပေမဲ့ အခုထိ ပြေလည်မှုမရသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လကုန်မှာ ထပ်မံ တွေ့ဆုံဖို့ ပြောဆို ထားခဲ့ပေမဲ့ တဖက်နဲ့တဖက် နေရာညှိနှိုင်းလို့ မရဖြစ်နေတာကြောင့် အခုထိ တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း မရှိဖြစ်နေ ချိန်မှာပဲ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်ပွားနေတာပါ။
ဝ တပ်ဖွဲ့လမ်းဖောက်လုပ်မှု တရုတ်ယွမ်ငွေဘီလီယံချီကုန်ကျ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဝ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော်မှပြုပြင် ဖောက်လုပ်နေသော မြို့တော်ပန်ဆန်းမှ နမ့်တစ်၊ မိုင်းမော၊ မန်းဆိုင်လမ်း လာမည့် နှစ်ပွင့်လင်းရာသီအပြီးဖောက်လုပ်ရန်ရှိပြီး တရုတ်ယွမ်ငွေ သန်းပေါင်း ထောင်နှင့်ချီကုန်ကျ ထားပြီဖြစ်ကြောင်း အရာရှိများအသိုင်းအဝိုင်းကပြောသည်။
“ ကျနော်တို့ ဘက်က လုပ်နေတာ တရုတ်ယွမ်ငွေ သန်းပေါင်းထောင်ချီ ကုန်နေပြီ။ မြို့တော်ပန်ဆန်းကနေ နမ့်တစ် -မိုင်းမော- မန်းဆိုင် -ပန်ဆန်း၊ပန်ဆန်း -မိုင်းပေါက်-ဟိုတောင်း လမ်းတွေပေါ့။
တချို့နေရာလဲပြင်တယ်တချို့နေရာလဲ ဖောက်တယ်။ ဒီလလယ် ပိုင်းကရောက်လာတဲ့ အစိုးရရဲ့ နတလ ဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့က ဒီလမ်းဖောက်လုပ်ရေးမှာ အနည်းအကျဉ်း ကူညီသွားတယ်။ ကျပ် သိန်း ၄၀၀၀ လောက်ပေါ့” ဟု ဝ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော်မှ အရာရှိတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် အားပြောပြ သည်။
ယနေ့ငွေလဲနှုန်းအရ တရုတ်ယွမ်ငွေ သန်းပေါင်း တစ်ထောင်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၇ နှင့်ကိုက်ညီသည်။ မြန်မာအစိုးရမှ လမ်းဖောက်လုပ်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့သော ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၀၀၀ သည် အမေရိကန်ငွေ ဒေါ်လာ ၄ သန်း၊ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂၄ သန်းဝန်းကျင် နှင့်ညီမျှပါသည်။
၎င်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ယခုလ ၂၈ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ဆုံဖူးရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးမှ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားများကို ပန်ဆန်း-ဝိန်းကောဝ်-မန်းဆိုင်သို့ဖြန့်ဖြူးပေးသည်ဟူသည့် ကိစ္စကိုလည်း သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကမေးမြန်း ရာတွင် အဆိုပါအရာရှိက- အော် ဒီရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်က လည်း ကျနော်တို့ ဝ တပ်ဖွဲ့လုပ်ထား တဲ့ဟာဘဲ။ အရင့်အရင်ကတည်းက လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုဖြန့်ဝေပေး နေတာဘဲ ။ သူတို့လာလည်ရုံသက်သက်ပါ- ဟု ဆိုပါသည်။
အဆိုပါ သတင်းစာတွင် နတလ ဝန်ကြီးက ဝ အထူးဒေသ ၂ အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ နှင့် ဆန်ဖိုးအတွက် ကျပ်သိန်း ၆၆၀ ထပ်မံ ထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုလည်းပါရှိ သည်။
ဂျွန်လကလည်း UWSA ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် သည် မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှ သေနတ်မျိုးစုံ ကွန်တိန်နာ ၄၂ လုံးထက်မနည်းဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အဖမ်းခံ လေးဦးအမှု ဒုတိယအကြိမ် စစ်ဆေး
Wednesday, August 29, 2012 မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်မှု
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းမှ ကချင်အမျိုးသား လေးဦးကို မတရားအသင်း ပုဒ်မ ၁၇(၁)ဖြင့် စွပ်စွဲကာ အင်္ဂါနေ့တွင် တရားလိုပြသက်သေ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ် ရဲလွင်အား စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်ဟု
ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါးက ပြောသည်။
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က ကိုဘရန်ယုန်၊ ဦးလဖိုင်ဂမ်၊ ဦးဇော်ဘောက်နှင့် ကိုဇခုန်လရိန် တို့အား ဝိုင်းမော်မြို့နယ် တာလောကြီး ကျေးရွာတွင် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်(မပခ) လက်အောက်ခံ ခလရ ၃၇ တပ်ဖွဲ့များက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရဲအုပ် ရဲလွင်အား သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ပထမဆုံးအကြိမ် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ယနေ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ၎င်းအား ထပ်မံ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကိုဘရန်ယုန်းသည် KIO စစ်သင်တန်း တက်ရောက်၍ ဒု-တပ်ကြပ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကာ ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ပြန်လည်နေထိုင်ပြီး ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ရန် KIO မှ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် တာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆား က ပိုက်ဆံ ထုတ်ပေးသည်ဟု အမှတ်(၁) ရဲစခန်းမှူး ရဲလွင်က ထွက်ဆိုသွားကြောင်း ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါး က ပြောသည်။
“ဦးဒွဲပီဆားက စစ်တပ်ဘက်ကမှ မဟုတ်တာ။ သူက ဗုံးဖောက်ခွဲရေးကိစ္စ ဘာမှ မပတ်သက်ဘူး။ ခု သူတို့ (အစိုးရ) က ပေါ်လစီ လုပ်နေတာ။ ခု မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလူတွေကို အားလုံး အပြစ်ပုံချဖို့ လုပ်နေတာ” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ကိုဘရန်ယုန်းသည် KIO ဝန်ထမ်း မဟုတ်သော်လည်း သူ့အား စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့(စရဖ)က ညှင်းပန်း
နှိပ်စက်၍သာ ဝန်ခံလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကိုဘရန်ယုန်း၏ ဇနီး မခေါ်နန် က ပြောသည်။
“စရဖ ရုံးမှာ သူတို့ကို တခန်းစီ ထားတယ်။ အခန်းကလည်း မှောင်မဲနေတယ်။ ကိုင်လိုက်ရင် ရွှ့ံဗွက်တွေချည်းပဲ တဲ့။ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်မှာ ပြန်ထုတ်ပြီး ညသန်းခေါင်မှာ စစ်ဆေးတယ်။ အကျႌတွေ အကုန်ချွတ်ပြီး သံလုံုးနဲ့ လှိမ့်တယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ယေရှုလို ချည်ထားပြီး ရိုက်နှက်တယ်။ သေနတ်နဲ့ နားထင်မှာ ရိုက်၊ ခေါင်းတွေမှာလည်း ရိုက်၊ ခေါင်းတွေလည်း ယောင်လို့၊ နားလည်း မကြားတော့ဘူး။ အဲဒီလို နှိပ်စက်တယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ခင်ပွန်း၏
ပြောပြချက်အား မဇ္စျိမကို ပြန်ပြောပြသည်။
သူက ဆက်ပြီး “မျက်နှာအုပ်ထားပြီး ဗုံးခွဲတဲ့နေရာကို ခေါ်သွားတယ်။ ဟိုရောက်တော့ မျက်နှာဖုံး ချွတ်ပြီး ဒါ မင်းတို့
ဖောက်ခွဲတယ်လို့ ဝန်ခံရမယ်။ မဝန်ခံရင် သတ်လိုက်မယ်လို့ ပြောလာလို့ ဝန်ခံလိုက်တယ်တဲ့။ ဝန်ခံလိုက်တာနဲ့ မျက်နှာကို ပြန်ပိတ်ပြီး အမှောင်ခန်းထဲကို ပြန်ခေါ်သွားတယ်လို့ ပြောပြတယ်” ဟု ပြောသည်။
အသက် ၅ဝ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးလဖိုင်ဂမ်အား ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်မှ စွပ်စွဲထားချက်နှင့် စရဖမှ စွပ်စွဲချက်များ ကွဲလွဲနေသည်ဟု ဆိုသည်။ စရဖက ဦးလဖိုင်ဂမ်သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ KIO က ခေါ်ယူ၍ ဝန်ထမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွတ်စွဲ ထားပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်မူ ဦးလဖိုင်ဂမ်သည် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် KIO ဝန်ထမ်း လုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသဖြင့် ကွဲလွဲနေ သည်ဟု ရှေ့နေက ဆိုသည်။
ဦးလဖိုင်ဂမ်၊ ကိုဘရန်ယုန်းနှင့် ကိုဇော်ဘောက်တို့ကို ဖောက်ခွဲအမှုဖြင့် တရားလို သက်သေဘက်မှ ထပ်မံ စွပ်စွဲထားသည်ဟု ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါးက ပြောသည်။
ဦးလဖိုင်ဂမ်သည်လည်း KIO ဝန်ထမ်း မဟုတ်ဘဲ သားသမီး ပညာရေးအတွက် ပိုက်ဆံရှာရန် ကျွဲကုန်သည်များနှင့် လိုက်ပါရာမှ ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦးလဖိုင်ဂမ်၏ ဇနီး ဒေါ်လချီးလု က ပြောသည်။
“သူကို ဘာလို့ KIO မဟုတ်ဘဲ ဝန်ခံရတာလဲလို့ မေးတော့ KIO လို့ မပြောဘူးဆိုရင် အသက်ရှင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တာလောကြီးမှာပဲ သေသွားပြီ။ ဝန်ခံလိုက်လို့ ခုလို အသက်ရှင် တွေ့ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ပထမရုံးချိန်းမှာ တွေ့တော့ သူက ခြေထောက်တွေလည်း ယောင်၊ မဲမဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တွေ့ရတယ်” ဟု သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
၎င်းတို့ကို ဖမ်းဆီးခံရစက မည်သည့်နေရာတွင် ဖမ်းဆီးထားသည်ဟု မသိရဘဲ တလအကြာတွင် မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့လိုက်ကြောင်း အကျဉ်းသားများ ထံမှတဆင့် ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့သူများထံမှ သိရှိခဲ့ရသည်ဟု ကိုဘရန်ယုန်း၏ ဒေါ်ခေါန်နန်က ပြောသည်။
၎င်းတို့အား စက်တင်္ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ရုံးချိန်းပေးလိုက်သည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစ၍ ယနေ့ထိ ဖောက်ခွဲမှု၊ KIO နှင့် ဆက်သွယ်သည့် မတရားသင်း ပုဒ်မ ၁၇(၁)ဖြင့် မပခ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များနှင့် စရဖ တပ်ဖွဲ့တို့မှ ဖမ်းဆီးထားရသူ စုစုပေါင်း ရ၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါးကပြောသည်။
KNU နှင့် မြန်မာအစိုးရ တတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်
တတိယအကြိမ်မြောက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ ညှိနှိုင်းပြီး ဆွေးနွေးမဲ့ရက် ပြန်လည်သတ်မှတ် အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၆ ရက်က ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း (ယာစွန်)၊ KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် နော်စီဖိုးရာစိန် (အလယ်)နှင့် နော်မေဦး (ဝဲ)တို့ကိုတွေ့ရစဉ်။
ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့မှာ လာမဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ KNU အဖွဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အာမခံချက်ရှိတဲ့ လုံခြုံမှု ရရှိရေး အဓိကထား ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း KNU အဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နော်မေဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ ဖားအံမှာ ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ ဒီဖားအံမြို့ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ကို ကျွန်မတို့ ထွက်မှာဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ၃ ရက်နေ့နဲ့ ၄ ရက်နေ့မှာ ကျွန်မတို့ အစည်းအဝေးလုပ်မယ်။ အဓိကကတော့ ဒီပြည်သူလူထုဘဝ လုံခြံုမှုကို အာမခံနိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကျွန်မတို့ အချက်နှစ်ချက် ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ်။ ပထမတစ်ချက်က နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လိုက်နာရမဲ့ ဒီကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းကမ်းပေါ့နော်။ ဒုတိယတစ်ချက်က တပ်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်"
KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနဲ့ မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့ ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့မှာ အခုသီတင်းပတ် သြဂုတ်လ (၂၇) ရက်ကနေ (၂၉) ရက်နေ့ထိ (၃) ရက်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အရင်က စီစဉ်ထားခဲ့ရာက အစိုးရဘက်က အကြောင်းပြချက် တစုံတရာ ပေးခြင်းမရှိဘဲ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ရက်ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကို ပြန်လည် ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။